Etu esi eji mkpu, elekere nkwụsị na elekere oti mkpu na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Windows 10 bụ sistemụ ọhụrụ Microsoft nke ọtụtụ mmadụ (gụnyere anyị) na-eji nwalee nke ọ bụla n'ime ya ọhụrụ atụmatụ. Nke nta nke nta, a chọpụtala ọtụtụ ngwaọrụ adọrọwo mmasị nke obodo niile na n'etiti nke pụtara ìhè, ya ala mkpu na mkpu elekere ngwá ọrụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, akụkọ banyere ihe ọhụrụ na nnukwu mmelite nke Microsoft nyere maka Windows 10, ihe ị kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ị na-eji ya oru version. N'isiokwu a anyị ga-ekwupụta ụzọ eji arụ ọrụ na ngwa ọrụ a nke Microsoft chọrọ yana ị nwekwara ike ịchọta ya na Windows 8, ọ bụ ezie na ị gaghị ahụ ya na nsụgharị tupu ya.
1 Ọrụ mkpu na Windows 10
2 Ngụ oge na Windows 10
3 Ọrụ elekere nkwụsị na Windows 10
Ọrụ mkpu na Windows 10
Ngwaọrụ ọhụrụ nke na-abịa na ndabara na Windows 10 tumadi tụlee ọrụ atọ, ịbụ onye mbụ n'ime ha nke anyị ga-ekwupụta n'oge a, ya bụ, na mkpu. Iji chọta ya, anyị na-akwado na:
Banye na Windows 10.
Na ị pịa bọtịnụ mmalite (na ala aka ekpe)
Dee na ọchụchọ oghere okwu «mkpu«
Site na obere usoro ndị a, ngwa ọrụ ga - apụta ozugbo na nsonaazụ ya; naanị anyị ga - ahọrọ ya iji nwee ike ịnụ ụtọ ya na ihuenyo zuru oke; ngwá ọrụ a bụ nke udi nke «ngwa ọgbara ọhụrụ» n'ihi na ihe na ya, i nwere ike ịbụ na-ahụ ya na ọdịdị na-atụgharị anya na «New User Interface»; Mgbe ị na-agba ya, ị ga-ahụ ihuenyo dị ka nke a.
Na njide a, ị ga-enwe ike ịhụ ọkwa nke ọrụ atọ anyị kwuru maka ya site na mbido, nke a bụ mkpu, oge na elekere nkwụsị. Na akụkụ aka nri enwere obere akara ngosi nwere akara «+», nke ị nwere ike ịhọrọ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye mkpu ọzọ. Naanị ịmetụ ọnụ ọgụgụ ahụ aka (nke na-anọchite anya oge) nke dị n'akụkụ etiti nke gburugburu, interface ga-agbanwe. Iji mee ule ahụ, ịnwere ike itinye a oti mkpu na iri iji lelee na ị nwere ike itinye ọtụtụ mkpu dị ka ịchọrọ.
Ọ bụ n'ezie ikpọ, ebe naanị ị ga-akọwapụta oge site na ịmegharị obere okirikiri nke dị n'ime; gburugburu na-adagharị na mpempe dị na mpụta na-anọchite nkeji. I nwekwara ike kọwaa otú oti mkpu a kwesịrị isi rụọ ọrụ, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ya kpọọ kwa ụbọchị ma ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ha; n'otu akụkụ enwere "mgbịrịgba" ahụ, enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu n'ime ha na nke ị nwere ike ịhọrọ, nke kachasị amasị gị. Naanị pịa (ma ọ bụ pịa) akara ngosi obere egwuregwu na-esote nke ọ bụla n'ime chimes iji nụ ụda ha.
Ozugbo ị kọwapụtara akụkụ nke mkpu a, naanị ị ga-alaghachi na ihuenyo gara aga wee họrọ akara ngosi mgbịrịgba nke na-ekwu "agbanyụọla" ka ịgbanwee na ọnọdụ "on".
Ngụ oge na Windows 10
Nke a bụ ọrụ ọzọ nke etinyebere n'ime sistemụ arụmọrụ a; enwere ederede na-ekwu «nggụ«, N’ihi na ọ bụ ihe ngwá ọrụ a ga-enweta n’ezie.
Dị ka na mbụ, n'ime gburugburu ga-enyere gị aka ịkọwapụta nkeji na mpụta nke sekọnd. Nwere ike ịgbakwunye akara ụda + ole ịchọrọ. Iji malite ngụ oge, dị nnọọ emetụ (ma ọ bụ pịa) akara ngosi dị n'etiti gburugburu, nke dị ka "egwu".
Ọrụ elekere nkwụsị na Windows 10
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ọrụ kachasị mfe iji mezuo, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-arụ ya pịa bọtịnụ dị n'etiti gburugburu nakwa na o nwere akara ngosi yiri nke ahụ nke «mmeputakwa».
Onweghi ihe ọzọ ime na ọrụ a, inwe ike ịghọta na oge na-amalite ịgba ọsọ ozugbo etinyere bọtịnụ a.
Dị ka i nwere ike na-enwe mmasị, ọhụrụ atụmatụ wuru n'ime Windows 10 na- jiri oti mkpu gị, oge ma ọ bụ elekere nkwụsị awade nnukwu ohere maka ndị chọrọ iji ndị a ego kama iji ha na nwoke mobile phones.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi eji mkpu na Wake-Windows 10
Oti mkpu ahụ abụghị ihe ọhụrụ na Windows 10, e tinyeworị ya na Windows 8.
Ekele XtremWize ... Echere m ma ọ bụrụ na m kwuru ya na isiokwu ahụ. Are zuru oke, elekere dị kemgbe Windows 8 ma yabụ a ga - eme ọkwa ọzọ ebe ndị ọzọ maka Windows 7. Daalụ maka nkọwa ahụ, ọ dị oke mma ebe ọ bụ na ọtụtụ amaghị ozi ahụ.
Felipe D. (@onyinyechi) dijo
Ọ na-arụ ọrụ na kọmputa anya?
Zaghachi Felipe D. (@PipeFG)
Ọ gaghị arụ ọrụ mgbe kọmputa na-hibernating ma ọ bụ gbanyụọ ya.
Mkpu ga-ada ụda mgbe emechiri ngwa ahụ, a gbanwere ụda ahụ, a kpọchiri PC gị ma ọ bụ n'ọnọdụ ụra.
N'ihi na mkpu anaghị arụ ọrụ mgbe mkpu mkpu, ọ ga-atọ m ọchị ịhapụ ngwa ahụ, maka nke ahụ m na-azụta elekere ọdịnala. Daalụ
Anọ m na-arịọ nke a nwa oge ... mkpu m anaghị apụ apụ ma ọ bụrụ na ha mere, mana ọ dị ka ọ bụkwaghị, ọ dịghị onye si na Windows zara m, enwere m olileanya ebe a Daalụ.
Ekwenyere m, na Giusseppe, ahụghị m uche ọ bụla ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị agbanye. Ọrụ a bụ telivishọn ruo ọtụtụ afọ. Daalụ maka post m chọrọ ịhụ ka o si arụ ọrụ.
Carlos Maldonado ebe obibi oyiyi dijo
Achọrọ m ịma otu m ga-esi edozi elekere nkịtị na ihuenyo, dị ka ngwa, Ohere 10
Zaghachi Carlos Maldonado
AMAGH H M KA M DI IME IWU ỌL .... .... imeela
Aga m anwale ya ma gwaa ya.
Zaghachi DANIEL ALEJANDRO DEVESA ARTEAGA
Aura bụ keyboard ọhụrụ nke Newskill maka ndị egwuregwu